जाजरकोट अस्पताल किन बन्दै छ बेहाल « प्रशासन
जाजरकोट । जिल्ला अस्पताल प्रमुख तथा डेन्टल सर्जन चाँदनी जैसवाल गत मंसिरदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागमा काजमा गएका र त्यहीँबाटै बिदेश भ्रमणमा रहेका कारण अस्पताल सहित प्रशासनिक कार्य पनि अस्तव्यस्त छ ।
अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत डा. निसराज बस्नेत पनि बिना बिदा एक वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् । गत कात्तिकमा आएर जागिर जोगाएका उनको त्यस यता हाजिरी रजिष्ट्ररमा गायल जनाइएको छ ।
त्यस्तै मेडिकल अधिकृत डा. कृष्णजंग शाह, मेडिकल अधिकृतहरू डा. धर्मराज रेग्मी केशरजंग कार्की र डा. सुनिल पुन पनि जिल्ला अस्पतालमा छैनन् । विभिन्न बहानामा जिल्ला छोडेका उनीहरू कोही व्यक्तिगत रुपमा, कोही एमडीको तयारीमा त केही तामिलमा छन् ।
यता जिल्ला अस्पताल भने करार सेवामा कार्यरत सिकारु डा. अमिन शाहको भरमा चलिरहेको छ । पचास शय्याको जिल्ला अस्पताल डा. शाहले जेनतेन चलाइरहो छन् ।
अस्पतालको प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी पनि उनले चलाउनु पर्दा उपचारमा समेत बाधा पुगिरहे पनि यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । अस्पताल प्रमुख नै नभएपछि चिकित्सकहरू आफू खुशी जिल्ला बाहिर हिँड्दा उपचार सेवा प्रभावित भएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीका अनुसार अस्पताल प्रमुख नहुँदा अस्पतालको प्रशासनिक कार्य अस्तव्यस्त र उपचार सेवा प्रभावित भएकाले काज फिर्ता गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि पहुँचको भरमा डा. जैसवाल मन्त्रालयमा काजमा बस्दै आएका छन् । मैले पटकपटक काज फिर्ता गराउन ताकेता गरे तर सुनुवाइ नभएको चर्चा गर्दै उनी भन्छन् ।– ‘जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दीमा कार्यरत कुनै पनि चिकित्सक जिल्लामा छैनन् । एकजना करारका चिकित्सकको भरमा जिल्ला अस्पताल चलिरहेको छ । एकजनाले २४ सै घण्टा उपचार गर्न कसरी भ्याउँछन् । निकै समस्या भइसक्यो ।’
लिम्सामा कार्यरत डा. सञ्जीवकिरण प्रधान, गर्खाकोटमा कार्यरत डा. पवन शाक्य र दल्लीमा कार्यरत डा. सञ्जयकुमार यादव र डा. सञ्जय थापा एक महिनादेखि जिल्ला बाहिर गउका छन् । डा. यादव जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहीले धम्क्याएको भन्दै जिल्ला छोडको बताइन्छ भने अन्य चिकित्सक एमडीको तयारीमा काठमाडौं गएका हुन् ।
लामो समयपछि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक गएर उपचार सेवा दिन थालेपछि खुशी भएका स्थानीय बासिन्दा अहिले निराश छन् ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले अस्पताल प्रमुख जैसवाललाई काजमा राखेर स्वास्थ्य विभागले नै अस्पताललाई अस्तव्यस्त पारेको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनले काजमा रहेका डा. जैसवालको काज फिर्ता गर्न र अन्य चिकित्सकलाई पनि जिल्लामा नियमित बस्ने वातावरण मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।
दुई वर्षअघि १५ शय्याको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको बनाइएपछि औषधि पाइन छाडेको हो ।